Loza mitaiza | Law Firms Dubai
Amin'ny fotoana atokanao ny zanakao eo ambany fanaraha-maso fikarakarana na sekoly, dia ara-dalàna ihany ny manantena fa ho voaro sy ho salama tsara ilay zandrinao mandritra ny fijanonany ao anaty trano.
Ny ratra amin'ny fitsaboana dia mety hitranga amin'ny fotoana rehetra.
Ny mpiasa amin'ny fikarakarana andro aman'alina dia afaka mihetsika tsy miraharaha
Ny Daycares dia antenaina fa hanana tombotsoan'ny tsara indrindra amin'ny zaza ao an-tsaina mba hampihenana ny loza mety hitrangan'izy ireo sy hitondrany ny toe-javatra toy ny an'ny ankizy ihany. Mampalahelo fa tsy izany foana no nitranga matetika.
Mpampiasa mpitsabo momba ny maratra manokana momba ny fitsaboana dia hanampy anao
Ny ratra amin'ny fitsaboana dia mety hitranga amin'ny fotoana rehetra. Ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny mpiasa ao an-tsekoly sy ny mpiasa dia afaka mihetsika tsy manao tsinontsinona ary manao fahadisoana ary matetika dia mitondra ratra izany. Saingy, aza mahatsiaro ho tsy afa-manoatra raha voadin'ny lozam-pitsaboana ny zanakao. Ny mpisolovava iray amin'ny mpitsabo naratra manokana dia hanampy anao hahazo valisoa marina amin'ny ratra maharitra amin'ny zanakao ary azonao antoka fa tsy hitranga intsony izany olana izany.
Famotehana ny adidy
Misy fomba marobe hanitsakitsahana na handikana ny fitsipiky ny fikarakarana. Ny mpiasa dia afaka mitandrina mandritra ny hetsika ivelany sy anatiny. Ny foibe na ny mpandraharaha sy ny tompony dia mety hanitsakitsaka ny adidiny amin'ny fikarakarana azy ireo raha tsy mahomby amin'ny fitazomana tsara ny fitaovam-pilalaovana, trano fidiovana ary efitrano fianarana any an-dakilasy; tsy mahavita manome tontolo madio sy madio izy ireo; na avelan'izy ireo miditra amin'ny entana ireo ankizy mametraka fahavoazana amin'ny fahavoazana.
Ny ivon-toeram-pitsaboana manolotra ny fitaterana dia mety tsy hitandrina ihany koa amin'ny tsy fanaraha-maso ny mpamily, manakarama mpamily tsy ampy taona, tsy mahavita mitandrina sy mijery maso fiara, ary tsy mahavita mahazo antoka fa voakitsoka tsara sy mipetraka ny ankizy.
Fihenan'ny tsy fitandremana amin'ny ratra amin'ny fikarakarana ny asa
Raha maratra amin'ny toeram-pitsaboana iray na ao amin'ny sekoly ny zanakao noho ny mpiasa tsy miraharaha, dia mety hanao hetsika tsy mitandrina ianao mba hanampiana anao hamerenana ny fahavoazana noho ny ratra maharitra amin'ny zanakao. Raha ny tontolo iainana no natao an-tsirambina na nokarakaraina tamin'ny fomba iray mety hampidi-doza ny ankizy, ny tompon'andraikitra foibe na ilay olona nokaramain'ny tompony hametraka ny ivony dia tompon'andraikitra amin'ny tsy firaharahiana ny ratra maharitra ateraky ny zaza iray. .
Fahatakarana ny fitsipiky ny fanararaotana sy ny tsy miraharaha
Raha maratra ny zanakao raha eo ambany fanaraha-mason-jaza, ivon-jaza, na olon-kafa tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana azy ireo dia azonao atao ny misoratra anarana ho an'ny tranga fanaraha-maso tsy misy vidiny. Amin'ny toe-javatra toy izany, ny olona nanaiky ny andraikitry ny zanakao nefa manao zavatra tsy mitandrina na tsy miraharaha dia mety ho voaheloka noho ny tsy fitandremany.
Mila porofo ianao fa ny fikambanana na ny olona dia nanaiky ny andraikitry ny fikarakarana ny zanakao mba hanaporofoana ny raharaha tsy manara-maso. Mila manaporofo koa ny tsy fahombiazan'ny mpikarakara anao ny manara-maso tsara ny zanakao. Mila manaporofo ianao fa ny fahavoazan'ny zanakao dia tsy azo ihodivirana ary mialoha ny tsy fahombiazan'ny mpanara-maso ny manara-maso ny zanakao.
Misy tranga mahery setra amin'ny ankizy raha eo ambany fiahian'ny antoko tompon'andraikitra anisan'izany ny fisolanana sy ny fikapohana. Manelingelina sy mampahatahotra izany amin'ny zaza sy ny ray aman-dreny ary zava-dehibe ny hikatsahana ny fahamarinana tamim-pahavitrihana ao amin'ny fitsaràn'ny lalàna ho azy ireo ho tompon'antoka amin'ny fahavoazana.
Mifandraisa amin'ny mpisolovava amin'ny zaza naratra
Mifandraisa amin'ny mpisolovava amin'ny ratra amin'ny zaza raha te hanana solontena voatokana sy mahery vaika ary za-draharaha izay hiady ho anao sy ny zon'ny zanakao ary hahazo valisoa feno.
manao tsinontsinona ao amin'ny trano fitaizana ankizy
Ny mpisolovava anay dia manana traikefa mihoatra ny 35 taona amin'ny raharaha tsy miraharaha momba ny fikarakarana andavanandro ary eto hanampy.